7 amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any atsimon'i Italia | Vaovao momba ny dia
7 amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any atsimon'i Italia
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, General, Italia, tora-pasika
Rehefa tonga ny andro mahasoa dia efa mahatsapa ho toy ny morontsiraka isika, ary satria efa fantatra ireo ao amin'ny faritra misy antsika, dia maniry ny hanonofy torapasika hafa misy tanjona mahaliana. Toy ny Tora-pasika 7 tsara indrindra any atsimon'i Italia. Any Italia dia tsy hisy ny tsy fahampian'ny tora-pasika tsara tarehy sy tany am-boalohany, miaraka amin'ny Ranomasina Mediterane ao aoriana ary miaraka amin'ny toetr'andro mahafinaritra.
Mariho ireto morontsiraka ireto, na dia mino hafa aza isika. Vitsy fasika fantarina izy ireo, fa ny morontsiraka italiana ary ireo nosy dia feno torapasika izay very very. Amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika ny laharan'ny tora-pasika fito izay tianay hitsidika anio hankafizantsika ny toetr'andro Mediteraneana.
1 Scala dei Turchi any Agrigento, Sisila
2 Marina Piccola any Capri
3 Marina dell'Isola any Tropea, Calabria
4 Spiaggia dei Conigli any Lampedusa, Sisila
5 Cala Rossa amin'ny nosy Favignana, Sisila
6 Baia delle Zagare any Gargano, Puglia
7 Cala Spinosa any Santa Teresa Gallura, Sardinia
Scala dei Turchi any Agrigento, Sisila
Manomboka amin'ny iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny rehetra izahay, fantatra amin'ireo hantsana fotsy sokitra atin'ny onja sy ny rivotra, izay namorona endrika hafahafa, toy ny hoe tohatra ireo. Ny anaranao, 'Tohatra an'ny Tiorka' Avy amin'ireo vatolampy ireo ary io no toeram-pialofana ho an'ireo piraty tiorka taonjato maro lasa izay. Any amin'ny morontsirak'i Realmonte, ao amin'ny faritanin'i Agrigento. Manana fasika tsara sy rano madio mangarahara izy, ary ny vatosokay tsy mihetsika amin'ny hantsana dia mahatonga azy ireo hanana loko fotsy tsara tarehy mifanohitra amin'ny ranomasina. Ankehitriny dia tsy mialoka ao intsony ny jiolahin-tsambo, fa azo antoka fa mendrika handany fotoana hiafina amin'ity morontsiraka ity, mandry eo ambonin'ny vatolampy na ao anaty fasika.
Marina Piccola any Capri
Rehefa miresaka momba an'i Capri isika dia mahatadidy fa ity nosy ity dia fialofana ho an'i Pablo Neruda, fa koa ho an'ny lehibe Kintana Hollywood tamin'ny taona 50, izay nahita ny paradisa tonga lafatra teto amin'ity nosy kely ity. Noho izany dia tsy azontsika jerena ny laharanay morontsiraka miorina amin'ity nosy tsara tarehy ity, fialofana anti paparazzi ho an'ny olo-malaza amin'ny vanim-potoana hafa. Androany dia mbola toerana malaza izy io, na dia tsy mbola nisy am-polony taona maro lasa aza, fa mbola mamindra ny hatsarana mitovy ihany. Ny Marina Piccola dia ao amin'ny faritr'i Campania. Helodrano kely arovan'ny rindrina vato misy fahitana ny hantsana izay manoloana ny morontsiraka. Misy fomba maro hahatongavana any, fa ny tena malaza sy voalohany dia amin'ny alàlan'ny Krupp, lalan-tohatra miolakolaka.
Marina dell'Isola any Tropea, Calabria
La Marina dell'Isola dia misongadina amin'ny famolavolana vatolampy ary ho morontsiraka an-tanàn-dehibe fa nofinofy. Ao amin'ny faritanin'i Vibo Valentia, any Tropea, Calabria, ity morontsiraka lehibe ity, izay misy eo anelanelan'ny 'Isola Bella' sy ny 'Playa de la Rotonda'. Izy io dia miavaka amin'ny vatolampy lehibe izay mivarina ao anaty ranomasina ary manasaraka ny moron-dranomasina, aiza ny fiangonan'i Santa María de la Isla, toerana masina Benedictine taloha. Amin'ny fotoana itiavantsika ny morontsiraka mahafinaritra dia afaka mankafy ny tanànan'ny Tropea isika, izay tsy tazana ny hantsana ny tranony, ary aiza no ahitantsika ny katedraly niavian'ny Romanesque.
Spiaggia dei Conigli any Lampedusa, Sisila
Ity dia 'Beach ny bitro' raha adikao amin'ny Lampedusa ny anarany. Izy io dia manana ny anarany amin'ny nosy kely eo alohany, Isola dei Conigli, ary heverina ho iray amin'ireo morontsiraka tsara tarehy indrindra eto an-tany. Ary mazava ho azy fa tsy maintsy ho izy satria toerana virjiny tsara tarehy be, misy rano madio mangarahara. Tokony holazaina fa rehefa tonga any ianao dia mila mandeha mandritra ny fotoana fohy amin'ny làlana iray ary rehefa fahavaratra dia feno olona matetika. Amin'ny faran'ny fahavaratra dia afaka mahita sokatra any an-toerana mihitsy aza isika raha tsara vintana.
Cala Rossa amin'ny nosy Favignana, Sisila
Ity Cala Rossa ity dia an'ny tahiry voajanahary ao amin'ny nosy Aegades, ao amin'ny Nosy Favignana. Toerana nanatanterahana ny fitrandrahana karoka taloha, ary ankehitriny dia faritra be mpizahatany. Izy io dia miavaka amin'ny rano madio tsy mampino, miaraka amin'ny tonony turquoise sy manga amin'ny faritra midadasika na fandroana snorkeling. Ny tontolo voajanahary manodidina izay ahafahanao mandeha an-tongotra sy ireo vatofisin'ny vatolampy dia mamita ny tolotra amin'ity morontsiraka mahaliana sy kanto ity.
Baia delle Zagare any Gargano, Puglia
Any amin'ny Valan-javaboary Gargano ho hitanao io bay io. Amin'ity helodrano ity dia zavatra maro no misongadina, ary izy io dia toerana voajanahary somary tsara tarehy miaraka amin'ny fisehoana dia, izay, na izany aza, dia efa mpizahatany kokoa noho ny taloha, ary manana elo amoron-dranomasina sy serivisy sasany. Izy io dia miavaka amin'ny fofon'ny voninkazo volomboasary ary koa ny fiforonan'ny vatolampy eo afovoan'ny ranomasina, izay noforonina tamin'ny fikaohin'ny rano sy ny rivotra, zavatra izay mampatsiahy antsika ny morontsiraka toa an'i Las Catedrales any Lugo, Espana.
Cala Spinosa any Santa Teresa Gallura, Sardinia
Ao amin'ny tanànan'ny Capo Head ho hitanao i Cala Spinosa, morontsiraka izay tratran'ny lalana somary mideza. Ny zavatra tsara amin'ity cove kely ity dia tsy ny rehetra no vonona ny hanao ezaka hahazoana azy io, nefa azo antoka fa mendrika ny mankafy an'ireny rano madio ireny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » 7 amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any atsimon'i Italia
Toeran-kaleha Eoropeana 10 mora vakansy
Mojácar, toerana mahafinaritra any Almería